नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्,- हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण बन्द गर भन्न सक्नुपर्छ::न्युज बिहानी
नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्,- हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण बन्द गर भन्न सक्नुपर्छ
विराटनगरमा अनधिकृतरूपमा भारतको फिल्ड अफिस छ । म परराष्टमन्त्री हुँदा भारतलाई हटाउनका लागि पत्र लेखियो । तर अहिलेसम्म हटेको छैन । यो त हदै भयो नि ! त्यसलाई बन्द गर्नु पर्छ । यो विषयलाई महत्वका साथ उठाउनु पर्छ ।
काठमाडौं, वैशाख २७ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भोलि शुक्रवार वाट नेपालको दुईदिने भ्रमणमा आउँदैछन् । उनको स्वागत र भ्रमण सफल वनाउन नेपालले अनेकन तयारीहरु गरिरहेको छ ।
संविधान निर्माण लगत्तै भारतले नेपालमाथी लगाएको नाकावन्दी नभुलेका जनताले भने उनको भ्रमणमा सरकारले आवश्यकता भन्दा वढी प्रचारमा समय खर्चेको आरोप लगाउन थालेका मात्र छैनन, आफुलाई राष्टवादी भनेर चिनाउने प्रयास गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली आखिरमा कस्ता नेता हुन् भनेर चर्चा परिचर्चा पनि गर्न थालेका छन् ।
नेपालीको आफनो सस्कार र सस्कृति भनेको आफनो देशमा आएका पाहुनाको स्वागतमा कन्जुस्याई गर्ने हुदैन । तर भारतीय हेपाहा प्रवृतिवाट आजित भएका नेपालीहरु सरकारले भारतसँग असमान सनिध सम्झौता, डुवान समस्या लगायत यावत विषयमा सिधा सिधा कुरा राखोस् भन्ने चाहान्छन् ।
मोदीको नेपाल भ्रमणका वेला नेपालले उठाउनै पर्ने एजेण्डाहरु के के छन् त ? न्यूज विहानीले पूर्व परराष्टमन्त्री समेत भईसकेका माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश)लाई सोधका थियौं, उनको जवाफ जस्ताको तस्तै :-
– सरकारले यो भ्रमणलाई कुन रूपमा लिएको छ, त्यसमा भर पर्छ सवै कुरा । नेपाल र भारतको बीचमा छलफल र समाधान गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । एउटा त, लामो कालखण्डदेखि रहिआएको असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन र नयाँ सन्धिद्वारा त्यसको विस्थापन गर्नु पर्ने एजेन्डा छ । यसमा सरकारले गम्भिर भएर कुरा उठाउनु पर्छ ।
– दोस्रो, सीमा समस्या । अहिले पनि सीमा मिचिएको छ । नेपाली भूभाग अतिक्रमणकै अवस्थामा छ । त्यसकारणले गर्दा नेपाल भारत सीमा नक्सामा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने प्रक्रियामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनु आवश्यक छ ।
– तेस्रो, भारतको सिमानामा भारततर्फको भागमा सडकहरू बनाउने नाममा बाँध जस्ता संरचनाहरू बनाइएका छन् । जसले गर्दा हरेक वर्ष नेपाली भूमि जलमग्न भई डुबान हुने अवस्था बनेको छ । त्योे गम्भीर समस्या हो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यताहरू उल्लङ्घन गरेर भारतले बलमिच्याइँ गरेको छ । त्यलाई जसरी पनि समाधान गर्ने हाम्रो महत्वपूर्ण एजेन्डा हुनुपर्छ ।
– चौथौ, नेपालले भारतसँग जुन–जुन सम्झौता गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयनको गति निकै सुस्त छ । त्यसलाई सच्याउने प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
– पाचौँ, हामीले चर्को व्यापार घाटा ब्यहोरिरहेका छौं । नेपाललाई अघि बढाउन यो विकराल व्यापार घाटा कम नगरी हुँदैन । त्यसको निम्ति मूलतः हामी आफैले निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूको उत्पादन गरेर नै अघि बढ्नु पर्छ । आयात प्रतिस्थापन वस्तुहरूको उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ । तर, भारतले कतिपय प्रक्रियामा सकारात्मक नीति लिदिएमा मात्र पनि एक हदसम्म व्यापार घाटा घटाउन सक्ने स्थिति छ । यस बारेमा छलफल गर्नुपर्छ ।
– छैठौँ कुरा, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अहिले पनि अतिक्रमण भएको छ । उदाहरणका लागि अहिले पनि विराटनगरमा अनधिकृतरूपमा भारतको फिल्ड अफिस छ । कोशीमा बाढी आई नेपालका सडक बिग्रिएका बेलामा भारतको भूमि भएर चलाउनुपर्ने नेपालका यातायातका साधनहरूलाई पास दिन भनेर त्यो अफिस खोलिएको थियो । हाम्रो बाटो बनिसकेपछि त्यो अफिस बन्द गर्नु भनेर म परराष्टमन्त्री हुँदा भारतलाई पत्र लेखियो । तर अहिलेसम्म हटेको छैन । यो त हदै भयो नि । त्यसलाई बन्द गर्नु पर्छ । यो विषयलाई महत्वका साथ उठाउनु पर्छ ।
– सातौं, भारतीय दूतावासबाट साना अनुदान सहयोग परियोजनाको नाममा योजनाहरू बाँड्ने गरिएको छ । यसलाई अब यसरूपमा निरन्तरता नदिने कुरा प्रष्ट गरिनु पर्छ ।